Global Voices teny Malagasy · 13 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 13 Novambra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Novambra 2018
Akon'ny Tontolon'ny Bilaogy Toniziana tamin'ny Septambra 2005.
Trinite & Tobago: Daroka Baomba Iray Hafa, Voafafa ny Porofo Rehetra
Karaiba13 Novambra 2018
Mitatitra ny daroka baomba fanindroany tao Trinite sy Tobago tamin'ity fahavaratra ity i Taran Rampersad, izay samy tsy dia nisarika firy ny sain'ny gazety irisam-pirenena.
Daroka Baomba, Daroka Baomba Inona?
Nisefosefo noho ny fiandrasana anaty horohoro i Londona, ary dia niara-nisento ny olona rehefa tsy nahomby indray ny fikasàna efatra andaroka baomba androany.
Iran: Voasambotra ireo Mpanohana an'i Akbar Ganji, Isan'izany ireo Bilaogera
Notanan'ny Hery Mpampihatra Lalàna sy lehilahy manao akanjo tsotra ary nentina tany aminà toerana tsy fantatra ny sasany tamin'ireo tanora nankao amin'ny Hôpitaly Milad taorian'ny antson'ireo bilaogera hanehoana ny firahalahiana amin'i Akbar Ganji.
Azia Atsimo13 Novambra 2018
Tezitra noho ny famonoana mpanao gazety ireo bilaogera Libaney
Namoy ny ainy androany tamin'ny baomba nipoaka tanaty fiara tao Beirota ilay mpanao gazety sady mpanao politika anti-Syriana malaza.
Natomboka ny loka bilaogy Toniziana voalohany Tunisie Blog Awards 2005 mba hampiroboroboana ny tontolon'ny bilaogy Toniziana, bebe kokoa, sy handrisika ireo bilaogera mba hiasa bebe kokoa ao amin'ny bilaogin'izy ireo ary hanome voninahitra ireo bilaogera izay manao asa tsara.